Ogaden News Agency (ONA) – Xarunta Dhexe ee JWXO oo ka warbixiyay Dagaalkii ka Dhacay Shalay Madhaafaanka Godey iyo Faahfaahino Kale
Xarunta Dhexe ee JWXO oo ka warbixiyay Dagaalkii ka Dhacay Shalay Madhaafaanka Godey iyo Faahfaahino Kale
Xarunta Dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia ayaa faahfaahin aan ka helnay ay kaga warbixinayaan laba dagaal oo ciidanka cadawga lagu riiqay iyadoo waliba lagaga furtay hub iyo saanada farabadan. Dagaaladan oo ay xarunta JWXO faahfaahin buuxda kaheshay ayaa udhacay sidan.
8/2/15 Deegaanka lagu magacaabo Madhaafaanka oo magaalada Goday ee caasimada Gobolka Shabeelle katirsan dagaal aad uculus oo ay iskaga horyimaadeen geesiyaasha JWXO ee daafacaya diintooda iyo dalkooda iyo Huubada uu gumaysigu kusoo uruuriyay Ogadenia ayaa cagta lamariyay ciidamadii cadawga oo aad u badnaa meela kala duwan la’isaga keenay. Waxaa wajigii hore ee dagaalkaba lajiidhay ciidankii wayaanaha oo laga dhigay mid ladilay iyo mid la dhaawacay.
Dagaalkan oo ahaa mid mudo dheer socda ayaa markale isla goobtii laysku farasaaray kadib markuu ciidanka cadawga soo gaadhay gurmad ka yimid magaalada Goday waxaana markale cagta lamariyay ciidankii gumaysiga oo si halhaleel ah goobta ooga yaacayay.
Hadaba Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa faahfaahin ka bixisay tirada bakhtigii ciidanka gumaysiga oo gaadhayay 60 askar iyo saraakiil kale isugu jiray meesha 85 kalana uu dhaawacyo kala duwan ku gaadhay.
Qof goobjooge ahaa oo xaruntu ay lahadashay ayaa xaqiijiyay in uu 45 dhaawac ah gacantiisa ku saaray baabuurtii ay ciidanka gumaysigu wateen. Sidoo kale 28 kamid ah ciidankii gumaysiga kaga dhaawacmay dagaalkaas ayaa xalay lamariyay magaalada Qabridahare iyadoo ay 2 kamid ah halkaas ku bakhtiyeen.
Dhanka kale 8/2/15 Ceelo-obo oo Galaalshe katirsan weerar aad loosoo qorsheeyay oo ay ciidanka xooga dalka Ogadenia ku qaadeen wuxuu guusha Allah solansiiyay ee CWXO uu mudo kooban kusoo afjaray ciidankii gumaysiga ee deegaankaas kusugnaa. Dagaalkan oo ahaa mid siwayn looga il helay ciidanka gumaysigaya ayaa dhagta dhiiga loodaray 18 askar oo ay ku jiraan taliyayaashii ciidanku 23 kalana waxaa soo gaadhay dhaawacyo kala duwan halka laga furtay 15 qori oo noocyada kala duwan ee hubka kakooban.
Labadaa dagaal oo ahaa kuwa aad u xoogan oo wali ay nooga hadhsan tahay faahfaahino dheeraad ah hadaan ka gudubno, waxaa;
27/1/15 Maraguduudshe oo dagmada Garbo ee Gobolka Nogob katirsan dagaal cwxo iyo kuwa gumaysiga ku dhexmaray waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 2 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
29/1/15 Xabaaldhalaanta oo dagmada Garbo katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 4 askari tiro kalana waa lagaga
29/1/15 Dulgaban oo oo Garbo katirsan weerar ay CWXO kuqaadeen ciidamada cadawga oo halkaas kusugnaa waxay kaga dileen inta lahubo 4
askari 3 kalana way kaga dhaawaceen.
31/1/15 Garbo-jiriso oo Dagmada Garbo katirsan dagaal xoogan oo CWXO iyo kuwa gumaysiga ku dhexmaray waxaa dhagta dhiiga loodaray 11
ciidanka wayaanaha ah 16 kalana waa lagaga dhaawacay sidoo kale waxaa laga furtay 4 qori oo kuwa darandooriga u dhaca ah.
31/1/15 Maraguduudshe oo Garbo katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 3 askari 5 kalana waa lagaga dhaawacay.
5/1/15 Dayr oo dagmada Awaare katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga Itoobiya lagaga dilay 3 askari 3 kalana waa lagaga
5/2/15 Duleedka Dagmada Shaygoosh dagaal kudhexmaray cwxo iyo kuwa gumaysiga waxaa ciidanka wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
6/2/15 Dayr oo Awaare katirsan weerar xoogan oo ay ciidanka wadaniga xoraynta ogadenia kuqaadeen waxay kudha kaga jareen 7 kamid ah
ciidanka wayaanaha 11 kalana way kaga dhaawaceen.
6/2/15 Ananu oo dagmada Awaare katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 6 askari tiro aan lacayimina waa lagaga
Dhanka kale 1/2/15 Deegaanka Aloosane oo dagmada Fiiq katirsan waxaa nin Hawaarin ah kudishay muwaadinad udhalatay wadanka ogadenia gabadhan oo lagumagacaabo Kowsar cabdulaahi maxamad ayaa 2 xabadood madaxa kaga xaraysan ninka hawaarinta ah kadib markuu isku dayay in uu kufsado waxayna falkan kufulisay isla qoriguu uu watay ninka Hawaarinta ah gabadhan halyeeyada ah ayay qabteen ciidankii Hawaarinta ee aagaas kadhawaa waxayna hada kujidhdilaan jeel kuyaala magaalafa Fiiq.